आशा लामाको विरोधमा बाहुनबादको झझल्को – Nepali News नेपाली समाचार
डिआर अटुको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत 'हाम्रो देश हामीलाई प्राण भन्दा प्यारो" गीतको भिडियो सार्बजनिक
Homeलेख/बिचारआशा लामाको विरोधमा बाहुनबादको झझल्को
नारी एक आमा हुन, एउटा आमाले नौ महिना कोखमा राखेर जन्माएको एक शिशु समयको वेग संगै हुर्किदै उ शारिरिक र मानसिक रुपमा पुर्ण सक्षम हुन्छ अनि भुल्छ उसले आफ्नो वितेका पलहरु, अनि सोच्छ नारी कमजोर हुन्छ, नारी अबुझ हुन्छन हर काममा नारीहरु पुरुष जतिको क्षमतावान हुदैनन, उसले कति छिट्टै भुलिसकेका हुन्छ कि उ जति आफुलाई सक्षम र बहादुर ठान्छ त्यसको पछाडी एउटी नारीको ठुलो हात रहेको छ भन्ने कुरा ।
पछिल्लो चरण युएईमा महिला अनि जनजाति त्यस माथि हिजो निरंकुश तानाशाही राज्यले पिपाको दर्जा दिएका तामाङ समुदायको एक चेली राजदूत भएर आउदा यहाँका अतिबादी ब्राह्मणबादबाट ग्रसित एकथरी मान्छेहरुको होस उडेका छ । हुन त दोष तिनीहरुको हैन दोष हिजो तिनका पुर्खाले बनाएको एकात्मकबादी सोचाइको हो । मान्छे सक्षम हुनको लागि नाक चुचो कि मुख छुचो हुनु पर्छ । तर तामाङहरुको न नाक चुचो हुन्छन न त मुख छुचो ! अरुले दशथरिको बखान लगाउदा तामाङले खस भाषामा एक शब्द नि स्पष्ट उच्चारण गर्न नसक्नुलाई नै उनिहरुले बौद्धिक क्षमताको मापनको रुपमा बुझ्छन तर बास्तबिकता त्यो हैन । बौद्धिकता उनको बोलीमा हैन व्यवहारमा हुनु पर्थ्यो तर नेपालको सन्दर्भमा एउटा उखान नै छ “बोल्नेको पिठो नि बिक्छ नबोल्नेको चमाल नि बिक्दैन” हो नेपालको शासन व्यवस्था र कार्यशैलीमा यस्तै भइरहेक छ ।
युएईमा रहेका बुद्धिजीवीहरुले आसा लामाको विषयमा नकारात्मक टिका-टिप्पणी गर्दैगर्दा मलाई कुलमान घिसिङको खुब याद आइरहेको छ । कुलमानको पछाडि घिसिङ नझुन्डिएर कार्की/दाहाल/ओली/पौडेल जस्ता थर झुन्डेको भए सायद नेपालको बुद्धिजीवीहरुको मानसिकतामा त्यति प्रभाव पर्दैन थियो होला जति कुलमान घिसिङलाई सताएको थियो। केपी ओली सरकारले असक्षम प्राधिकरण प्रमुख भनेर कुलमानलाई कारबाही गरे पछि उहाँलाई जेल पठाउने व्यापक तयारी थियो तर केपी सरकार ढल्ने बित्तिकै प्रचण्ड सरकार आएकोले त्यो भएन । प्रचण्ड सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुन: प्राधिकरण प्रमुख बनायो देशले नसोचेको परिवर्तन पायो जबकी यो सरकार सफल हुनुको पछाडि कुलमानको ठुलै भुमिका रहने पक्कापक्की छ तर स्मरण रहोस कुलमान घिसिङले लोकसेवा आयोगमा खुला सहसचिवको परीक्षा दिदा मौखिकमा उनका प्रतिस्पर्धी दिनेश घिमिरे पास भएका थिए। भने पछि आफै विचार गर्नुस् यि ब्राह्मणबादी समाजले बौद्धिक मापन कै आधारमा गर्दो रहेछ ।
हुनत ईतिहास कोरेको पनि त्यस्तै छ अनि कसरी बुझ्नु आदिवासी जनजातिहरुको सक्षमता ! हामीले नेपालमा मात्रै हैन विदेशी भूमिमा समेत हाम्रो सक्षमता देखाएका छौ । कश्मिर देखि फक्लैण्डको टापुहरु सम्म लडेर विरताको इतिहास कोरियो तर यहाँका एकल जातिय तानाशाही वर्गले हामीले कालापानीमा देखाएको विरताको ईतिहास समेत कोरेन। पाण्डेहरुको एउटा आँखा फुटेको इतिहास कोरियो तर विर बहादुर तामाङहरुले माटो बचाउदा रगत बगाएको इतिहास कोरिएन, हजारौं तामाङ गुरुङ मगरहरुको बलिदानलाई लुकाएर एकदुई जना खस जातिलाई मुख्य पात्रा बनाएर इतिहासलाई बाङ्गाएर लेखियो अनि कसरि देख्छौ र हाम्रो सक्षमता खस जातिले लेखेका एकोहोरो इतिहास पढेर ? हो आसा लामालाई असक्षम देख्नु पछाडि तिनीहरुले लेखेको भ्रमात्मक इतिहासको ठुलो भुमिका छ।
आशा लामा अंग्रेजी साहित्यमा मास्टर गरेकी एक जनजाति चेली हुनु । सिंगापुरबाट कार्गो विषयमा आइएटिस गरेकी छिन । विभिन्न देशमा निजि नोकरी गरेर विदेशी भुमिको वेदना बुझेकी छिन । हुन त हिन्दी फिल्मको करिना कपुर चिन्नेहरुले आशा लामालाई नचिन्नु खासै नयाँ र नौलो कुरा हैन। हिजो निरंकुश राज्य व्यवस्थामा शासक जातिले अस्मिता लुटेर मिल्काएको हाम्रो चेलीहरुलाई हिजो कै दर्जामा राखेर सोच्नु विडम्बनाको कुरा हो । नेपालको सानो ठुलो युद्ध आन्दोलनमा चेलीहरुको बहादुरी यतिछिट्टै भुल्नु ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
आशा लामा को हो भन्ने कुरा केही महिना अगाडि मानब तस्करमा सिरियामा सात हजार डलरमा बेचिएका रेनु मगरलाई गएर सोध ! उनको आँखाबाट बगेको आसुको थोपाहरुको गहिराइ डुबेर मनन गर्नु , को हो आशा लामा भनेर ? कुवेतमा घरेलु कामदारमा बन्धक भएकी काभ्रेकी २६ वर्षिया सोम माया तामाङको बेदनालाई बुझ्नु अनि सोध्नु सोम माया तामाङ को मानसिक सन्तुलन गुम्ने अवस्थमा पुगेको जिवनसंगि संग पनि ! अनि आफैले आफैलाई सोध्नु को हो आशा लामा ?
नेपालका जातिबादी मिडियाले यति सम्म भ्रम फैलाइयो कि उहाँ दार्जिलिङमा जन्मेकी अङ्गीकृत नागरिकतावाली नेपाली हुन भनेर। जसको विहे नै भएको छैन कसरी अङ्गीकृत भए उहाँ नेपालको इलामको माने भाञ्ज्याङमा जन्मेकी तर उच्च शिक्षा भने दार्जिलिङमा बसेर हाँसिल गरेकी थिइन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुरको जिवन संगिनीको साथी भनेर गलत प्रचार गरेका छन तर उहाँ बास्तबमा राजनीति दल भन्द माथि राज्य र राज्य भित्रको चुनौती ठुलो ठान्ने एक निस्वार्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ । पहिचान र जनजाति अधिकारको चर्को अवाज उठाउनेहरु मध्येमा उहाँ नि एक हुनुहुन्छ । कुनै बेला जनमोर्चाको तर्फबाट प्रत्येक्ष चुनाबमा उठेकी उहाँ राष्ट्र सेवाको अवसर पायो भने भोली तमालोपामा समेत जाना सक्छिन् । उहाँको व्यबहारलाई विश्लेषण गर्द सामाजिक कार्य गर्न नेतृत्वमा बसेर गर्न पाए अलि सहज अनुभुती हुन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ त्यसैले उहाँ कुनै एक पार्टीको नोकरी भएर बस्नु हुन्न। कांग्रेस भित्रको जनजातिहरुको चर्को दबाबले उहाँ कांग्रेसको तर्फबाट यूएई राजदूतको नियुक्ति भएकी हुन।
आशा लामाको विरोध त गर्दैछन तर विरोध भित्र कुनै सत्यता देखिदैन । यथार्थ भन्द निकै पर गएर विरोध गर्नु जातिबादी चिन्तन मात्रै हो । बाँदरले न आफ्नो घर बनाउछ न अरुलाई बनाउन दिन्छ । हो आशा लामा मेनपावर व्यवसायी थियो काम गर्दै जाँदा पार्टनर सिपहरुको कारणले समस्य पनि आएका हुन तर सबै समस्यहरु समाधान गराइसकेका छिन । २०११ जुनदेखि आशा फाउन्डेसन संस्था मार्फत परोपकारी काम सञ्चालन गर्दै आएकी उनि अमेरिका, युएई, सिंगापुरजस्ता देशमा बसेर महिला अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकी छिन ।
आशा फाउन्डेसन मार्फत महिला कामदार विदेश जानु पहिले उनीहरूलाई सम्बन्धित देशको भाषाको ज्ञान दिनेदेखि लिएर तोकिएको काममा दक्ष बनाउन विभिन्न चरणका तालिम र परामर्श दिने कार्यक्रम ल्याउँछिन् ताकी कुनै पनि नेपाली चेली विदेशी भुमिमा दुखा नपाउन भन्ने उदेश्यले । अहिलेको ग्लबलइजेसनको जमानामा मान्छेहरु विदेश जानु हुन्न भन्ने धारणा पनि अलि संकुचित हुन सक्छ किनभने हाम्रो देश एउटा मात्रै हैन वैदेशिक रोजगारको लागि दोस्रो राष्ट्रमा जाने । अमेरिका जस्तो शक्तिसाली र विकसित राष्ट्रका नागरिकहरु पनि हजारौं सङ्ख्यामा भारतमा बस्दै आएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकका छन। मात्रै बाहिरी देशमा गएर काम गर्ने, पढ्न जाना इच्छुक सबैलाई एक प्रकारको व्यवस्थित तरिकाले पठाउन सक्नु पर्यो , नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर कुनै पनि मेनपावरबाट नेपालीहरुलाई विदेश पठाइरहेका छन भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन ।
आशा लामाले आफ्नो फाउन्डेसन मार्फत विदेशमा गई फसेका धेरै महिलाहरूको उद्धार गरि ठुलो परोपकारी कामहरु गर्दै आइरहेका छिन् । कुनै पनि नेपाल चेली विदेशमा जानु भन्दा पहिले परामर्स दिने, वैधानिक बाटो बारे जानकारी दिने र महिलालाई विदेश पठाउन सहजीकरण गर्ने काम गर्छ । मेनपावर व्यवसायी भएकै कारण विरोध र गलत भन्ने हो भने आशा लामा संगै ओमनको लागि राजदूत नियुक्ति भएकी शर्मिला पराजुली पनि त मेनपावर व्यवसायी नै हुन किन नेपाली मिडियाले आशा लामालाई मात्रै मेनपावर व्यवसायी देख्यो त ? यि सबै तथ्य र यथार्थ भन्द टाढाको विरोध भनेको अतिबादको निरन्तरता मात्रै हो। बाँकी विश्लेषण उहाँको भोलीको दिनहरुको कामकारबाहीले मुल्यांकन गर्ने हो । उहाँको कार्याकाल सफलताको कामना ।
हाल : युएई,अबुधाबी
भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा अख्तियारको छापा
काठमाडौँ महानगरपालिकामा अबदेखि ३२ वटा वडा मात्रै रहने